Chili: Tsunami mahavoa an’ireo nosy Juan Fernández · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2010 11:44 GMT
Faritra Siliana iray hafa no tsy afa-bela tamin'ireo onja nateraky ny horohorontany mahery vaika ireo nosy Juan Fernández 667 km miala ny morontsiraka Siliana. Noho ny hakelezan'ny elanelana misy eo amin'izy ireo dia misy ireo tatitra azo antoka momba ny fahasimbàna sy fahafatesana nateraky ny tsunami. Maro no mitatitra fa tsy ampy fotoana niomanana tamin'izany ny mponina ka tsy nahafahana nitsoaka tamina toerana avoavo kokoa.
Mpampiasa Twitter maro izay manana tapaka sy namana any amin'ireo nosy ireo no mitady vaovao tsy ankiato indray amin'ny Twitter [es] momba izay misy azy ireo. Indray mandeha dia nisy tamin'izy ireo afaka nifandray amin'ny olona notadiaviny ka nizara vaovao tamin'ny Twitter.
Tany amin'ireo nosy niaraka tamin'ny sipany ny rahalahin'i Pedro Huichalaf (@Huichalaf). Farany dia afaka nifandray [es] taminy ihany i Huichalaf taoriana fotoana maro mampivadi-po [es]:
Nifandray tamin'ny rahalahiko any amin'ny nosy Juan Fernández aho. Niteny izy fa diso aoriana loatra no nanambaràna ny fivian'ny tsunami
Niteny ny rahalahiko any amin'ny nosy Juan Fernández fa tsy nampanenoina ny fanairana tsunami raha tsy efa re nanakaiky ny onja
Nozarainy ihany koa ny laharan-tariby ahafahan'ny tsirairay mifandray amin'ny tapaka sy namana amin'ny fampiasàna ny telefaonina ao amin'ny tobim-piaramanidina sivily any amin'ny nosy, izay nilaharan'izy ireo mba hafahana mandray sy mandefa antso an-tariby [es].
Rehefa mivoaka ny vaovao momba ny anaran'ireo azo antoka fa maty, maro ireo mpampiasa Twitter tahaka an'i Mauricio Almazan (@mauro009) izay mampahafantatra ny fahalasànan'ny namany nianatra tany amin'ny nosy [es], na i Francisca Ulloa (@franuyeah) nahafoy namana ihany koa [es], izay mpahaiaina an-dranomasina (“biologist”) tany amin'iray amin'ireo nosy ireo. Very havana [es] kosa i Hector Zamora (@melonzamora) :
la ola de juan fernandez se llevo a mi primo 🙁 y aparecieron alrrededor de 20 cuerpo no identificados
Lasan'ny onja tany Juan Fernández ny ‘cousin’-ko 🙁 ary faty 20 tsy fantatra anarana no hita
Manana lisitr'ireo azo antoka fa maty [es] koa i Zamora, ka maro ireo mpampiasa Twitter no te-hahazo vaovao avy aminy [es]:
Manana lisitra olona fito fantatra fa maty aho sy olona tsy hita maro, nefa tsy voavakiko ny sora-tànan'ny reniko izay mitomany ny nahafatesan'ny “cousin”-ko.
Na izany aza, tankina ny alahelony 15 ora tao aoriana, raha nahazo vaovao izy milaza fa hita velona ny ‘cousin’-ny [es]. Nentin'ny onja tany amin'ny ilan'ny nosy izy, izay vaovao mahafaly tokoa ho an'ny fianakaviany taorian'ireo vaovao voalohany nilaza fa maty izy.
Rehefa niparitaka ny vaovao momba ny tsunami sy ny fahasimbàna naterik'ireo onja, maro ny toa an-i Felipe Parra (@Kaosrq) no tsy afa-manoatra fa manontany amin'ny Twitter sisa[es], “Sao dia mba misy mahafantatra hoe nahoana ny mponin'i Juan Fernández and Talcahuano (faritra hafa voadona) no tsy afaka nahazo fanairana?” Ny Birao Nasionalin'ny Vonjy taitra (ONEMI) dia nanilika ny fahadisoana tany amin'ny Tafika an-dranomasina Siliana [es], izay nanambara koa fa tsy anjara andraikiny ny mandefa fanairana. Ny Tafika an-dranomasina miteny fa ny fampitàna vaovao momba ny hahavon'ny ranomasina ihany no ataony. Na izany na tsy izany dia niteny ny ONEMI fa simba ny fitaovana ara-dranomasina sasantsasany tamin'io andro io ka nampita vaovao diso [es].
Raha tsy jerena ny amin'izay tokony homelohina, Siliana maro tany amin'ny kontinanta no misaona ny fahaverezan'aina sy ny tsy fahafahan'izy ireo nahazo fanairana ara-potoana. Manoratra i Juan Pablo Mena (@Somosmarketing) :
Tsy vitako ny manazava ny fahatsapan'ireo mponin'i Juan Fernández ho Siliana, raha tsy vitantsika akory ny mandefa fanairana tsunami ho azy ireo